पराजित हुने देखेपछि सर्बोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति खनिन थाले ओली
वि.सं २०७७ फागुन १८ मङ्गलबार फोरेक्स युनिकोड मौसम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी रुपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा किनारा लाग्ने दिन नजिकिदै गर्दा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिक यो मुद्धा फैसलाको चरणमा प्रवेश गर्नै लागेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिराटनगरमा आफ्नै राजनीतिक सभामा केही संकेत गरेका छन् ।
आन्दोलनरत नेकपाको बहुमत पक्षले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरिरहेको छ । नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्ग सरकारले गरेको संसद विघटनको कदम गलत भएको ठहरसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । यो पक्षले संसद पुनस्थापना हुने बताईरहेका बेला केही समय अघि सम्म प्रधानमन्त्री ओली त्यो संभव नभएको र अदालतले गर्ने निर्णय लोकतन्त्रमा सर्बोपरि हुने भाषण गरिरहेका थिए । अदालतलाई प्रभावित गर्न नहुने बताउदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको सभामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने कुरा मात्र गरेर घुमाउरो भाषामा गाली नै गरे । आफूले चालेको कदमलाई अनुमोदन गर्नेगरि अदालतले फैसला नगरे अन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको बहस र संभावित फैसलाको पूर्वनुमान गरेको हुनसक्ने राजनीतिक बृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मात्रै निर्वाचन आयोगप्रति पनि कटाक्ष गरेका थिए । आयोगको कामप्रति असन्तुष्टी जनाएका उनले आयोगले समेत उनले दावी गरेको पार्टीलाई आधिकारिकता नलिने संकेत मिलेपछि कटाक्ष गरेको नेकपाका नेताहरु बताउछन् ।
संसद विघटन लगत्तै भने ओली पक्षका सबै नेताहरुले सबै कुरा सेटिङमा भएको र प्रधानमन्त्रीको कदम अनुमोदन हुने भन्दै देशभरी हल्ला फैलाएका थिए । ओली पक्षका वडाकमिटी देखि केन्द्रसम्मका सबै नेता कार्यकर्ताहरुले सबै बाले सेटिङ गरेर राखेका छन् भन्दै हिडेका थिए । तर १ फागुनबाट भने ओली आफैमा भयको सन्त्रास फैलीएको देखिन्छ ।
देशको प्रधानमन्त्री आफै संसद विघटन गर्छ । उनको असंवैधानिक कमद विरुद्ध मुद्दा परेको छ । जुन हिजोबाट बसह र सल्लाह सुझाव लिने काम पनि सकिएको छ । त्यहि नै ओलीमा सन्त्रास बढ्दो क्रममा रहेको छ । उनी कति सम्म त्रासमा छन् भन्ने कुरा विराटनगरमा भएको आम सभामा गरेको सम्बोधन हेरे पुग्छ । उनले आज विराटनगरको सभामा सरकारको प्रधानमन्त्री होइन प्रतिपक्ष अझ आन्दोलनरत दलको नेताले पनि अहिलेसम्म नगरेको भाषामा सर्वोच्च अदालतलाई ललकारेका छन् । अथवा धम्काउन थालेका छन् ।उनले आज विराटनगरमा भाषण गदै भनेका छन् ‘सर्वोच्च अदालतले फैसलापछिका परिणतिहरु पनि हेरेका होला ।’ ओलीमा यतिमा रोकिएनन् उनले सर्वोच्च अदालतलाई देशभरी भइरहेका आफ्ना सभाहरुलाई पनि हेरिरहेको होला भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन् । उनले भनेका छन्‘सर्वोच्च अदालत देशभरी भइरहेका सभाहरुलाई हेरीरहेको होला । संविधानको भावना र मर्मलाई हेरेको होला । यसपछिका परिणतिहरु ,मुलुक कतातिर जान्छ भन्ने हेरेको होला ।’
ओली सुरु सुरुमा जति विश्वस्त थिए फैसला हुने अवस्थामा आइपुग्दा उनीमा विश्वास होइन त्रसित भएका छन् । उनी त्रसितमात्र भएका छैनन् । अहिले खुल्ला रुपमा सर्वोच्च अदालतमा धम्काउन थालेका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला नभए आन्दोलन गर्ने छौ भन्दै सभामा भन्न थालेका छन् । यसबाट थाह हुन्छ अब ओलीको पक्षमा फैसला नहुन सक्छ । त्यो संकेत उनले सर्बोच्च अदालतको नेतृत्वबाट पाईसकेका छन् ।
माघ मसान्तसम्म सेटिङको धङधङि लगाउदै हिडेका उनी र उनका पक्षका मानिसहरु अहिले भने मौन बसेका छन् ।
उसो त उनीमा त्रासको सुरुवात १ फागुनमा बुटवलमा भएको आमसभामा देखिएको थियो । उनले सर्वोच्च अदालतमाथि आशंका व्यक्त गरेका थिए । यसमा उनको सेटिङले काम नगर्ने होइन । उनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुको बहसबाट नै निराश हुन थालेका थिए । उनले त्यहि भएर बुटवलमा आफु अनुकुलको फैसला सर्वोच्च अदालत नगरे मान्ने नहुने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले ओली आफु हारको संघारमा पुगेको महसुस गर्न थालेका छन् । त्यहि भएर हरेक कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई धम्काउन थालेका छन् ।
जब कि धनगढी देखि काठमाडौंका आमसभामा ओली संसद कुनै पनि हालतमा पुनस्थापना हुदैन भन्दै भाषाण गर्थे । तर आज विराटनगर पुगेर पुन स्थापना हुदैन भन्नुको सट्टा आफु अनुकुल फैसला नभएको के हुन्छ थाह छ ? भन्दै सोध्न थालेका छन् । यति होइन आन्दोलनको घोषणा गर्न थालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका ५ जना एमिकस क्युरीका सदस्यका तर्फबाट दिएको सुझावमा ५ मध्ये ४ जना अधिवक्ताहरुले विघटनको गलत भएको सुझाव दिए । त्यसपछि त ओलीको मानसिकता यति हतासपूर्ण देखियोकी उनी आफै आन्दोलन गर्ने भन्दै आमसभामा बोल्न थालेका छन् ।
पार्टीमा पनि उनी अल्पमतमा छन् । शुक्रबार मात्र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २८८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले नागरिकता बुझाएका छन् ,सम्भवत भोली सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन आयोगमा जाने तयारीमा छन् । सबै तिरबाट एक्लीदै गएपछि ओली सरकारबाट बाहिरीने बित्तिकै आन्दोलन गर्ने घोषणा गदै छन् । उता ओली पक्षको युवा संघले आफु युवा संघ होइन अब ओलीको साइबर सेना हुने घोषणा गरेको छ ।
ओलीले निर्वाचन आयोगमा नै गएर आफु जीवनभरी सूर्य चिन्हमा लडेको भन्दै धम्काएका थिए ।
संसद विघटनका विरुद्ध परेका मुद्दामा बहस सकिएको छ । मुद्दाको पेसी ११ फागुनलाई तोकेको छ । १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउने समय दिएको छ । सायद ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला हुने छ । जुन फैसला ओलीको पक्षमा नहुने छनक पाएर होला ओली १ फागुनबाट निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई धम्काउन थालेका छन् । उनको यो हतास र सन्त्रासको मानसिकताको प्रस्तुति हो ।
ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेकी थिइन । संसद पुनस्थापना भएमा यो देशको इतिहासमा ओलीको नाम संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारीको नामले चिनिने छ । जुन इतिहासको कंलक हो । संसद पुनस्थापना भएपछि उनलाई हटाउन बहुमतमा रहेको नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजाने छ र बहुमतका आधारमा हटाउने छ ।
शनिवार ८, फागुन २०७७ २२:५४:११ मा प्रकाशित
मोरङमा तेस्रो चरणको कोरोना खोप अभियान फागुन २३ देखि
पेट्रोलियम चोरी गर्ने ट्याङ्करमाथि निगमको ऐतिहासिक कारबाही
१० सेकेण्डको भिडियो ७७ करोडमा बिक्रि ! [भिडियोसहित]
एभोकाडोमा प्रयोग हुने किटनाशक औषधिका कारण मौरीको अस्तित्व खतरामा ! [फोटोफिचर]
सर्वोच्चले भन्यो : गैरकानुनी थुनामा कसैलाई नराख्नु !
विप्लव समूहले बनायो दुई सदस्यीय वार्ता टोली
अनाधिकृत निकासी रोक्न माग गर्दै रुपन्देही उद्योग संघले बुझायो ज्ञापन पत्र
यस्तो छ 'काठमाडौं मेयरकप क्रिकेट' को खेल तालिका